Izinja eziluhlaza okwesibhakabhaka zivela eNdiya ngenxa yokungcola | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinga lokungcola eNdiya lifinyelela ngaphezu kwamazinga ethusayo. Izinja eziningi zaqala ukuvela ezinsukwini ezedlule zinombala oluhlaza okwesibhakabhaka edolobheni laseBombay nendawo ezungezile. Ukusabela okuyinhloko kwabantu neziphathimandla bekuwukuthola ukuthi ngubani obephethe. Ekugcineni, bathola isigebengu, kwakungeyena umuntu, kodwa umfula ababegeze kuwo.
Izitshalo zezimboni zaseTaloja, eduze nomfula iKasadi, babezinikezele ku ukulahla imfucumfucu enobuthi ngqo emanzini isikhathi eside. Esinye salezi zitshalo zezimboni yifektri esebenzisa udayi ukukhiqiza okokuhlanza. Imfucuza yale mibala iphonswe emfuleni osendaweni engama-35km ukusuka edolobheni, futhi ikhona asikho isijeziso esisemthethweni sokwenza kanjalo. Njengoba kubikiwe futhi kwaqinisekiswa yiphephandaba langakini Hindustan.
Zingu-6 izinja ezitholakele
Ukushisa okukhulu okuhlukumezeka edolobheni, kwaphoqa izilwane ukuba zipholile emifuleni. Khumbula lokho izinja azijuluki, futhi basola ukushisa ngaphezu kwabantu ngokwabo. Imiphumela yalokhu idlulela ngale kokupeyintwa okwesibhakabhaka. Kuyinto eyingozi kakhulu, kokubili esikhumbeni sakho nalapho uphuza amanzi. kungcoliswe okuya ngqo endaweni yakho yokugaya ukudla.
Umhlangano wabantu ubethusa, ikakhulukazi ngaphambi kokungakholwa kokungazi isizathu sokuthi kungani ekuqaleni. Izinhlangano zokuvikela izilwane sezivele zifake izikhalazo futhi kuthathwa izinyathelo zokulawula izenzo ezifana nalezi. Wonke umuntu ulahlekelwa, futhi kuyaqondakala ukuthi kuphuma esandleni.
Bangu-76.000 abantu abasebenza eTaloja, kunezimboni ezingama-977 zamakhemikhali, ezokwenza imithi nezokudla. Umfula iKasadi, unezinga lokungcola okuphindwe izikhathi eziyi-13 kulokho okungathathwa njengokuphakeme kakhulu okwamukelekayo. Futhi ngukuthi, uma singeke sikwazi ukubhekana nokungcola esikukhiphayo, singazama kanjani ukubhekana nezinkinga?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Izinja eziluhlaza okwesibhakabhaka zivela eNdiya ngenxa yokungcola